Mateu 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 9:1-38
9 Saka akakwira chikepe, akayambuka, akapinda muguta rekwake.+ 2 Uye vakabva vamuunzira munhu akaoma mutezo akarara pamubhedha. Paakaona kutenda kwavo, Jesu akati kumunhu akanga akaoma mutezo: “Shinga, mwanangu! Zvivi zvako zvaregererwa.”+ 3 Vamwe vanyori vakabva vatanga kutaurirana vachiti: “Munhu uyu ari kumhura.” 4 Jesu, achiziva zvavaifunga, akati: “Muri kufungirei zvinhu zvakaipa mumwoyo menyu?+ 5 Munofunga kuti ndezvipi zviri nyore, kuti, ‘Zvivi zvako zvaregererwa,’ kana kuti, ‘Simuka ufambe’?+ 6 Asi kuti muzive kuti Mwanakomana wemunhu ane simba rekuregerera zvivi panyika—” akabva ati kune uya akanga akaoma mutezo: “Simuka, tora mubhedha wako, uende kumba kwako.”+ 7 Akabva asimuka akaenda kumba kwake. 8 Vanhu vazhinji pavakaona izvi, vakabatwa nekutya, vakakudza Mwari, uyo akapa simba rakadaro kuvanhu. 9 Achibva ipapo, Jesu akaona mumwe murume ainzi Mateu akagara pahofisi yemutero, akati kwaari: “Iva muteveri wangu.” Akabva angosimuka akamutevera.+ 10 Gare gare, paakanga achidya ari mumba, vateresi vazhinji nevatadzi vakabva vauya, vakatanga kudya naJesu nevadzidzi vake.+ 11 Asi vaFarisi pavakaona izvi, vakati kuvadzidzi vake: “Nei mudzidzisi wenyu achidya nevateresi nevatadzi?”+ 12 Achivanzwa, iye akati: “Vanhu vane utano hwakanaka havadi chiremba, asi vaya vanorwara vanomuda.+ 13 Saka endai, munodzidza kuti zvinorevei kuti: ‘Ndinoda ngoni, kwete chibayiro.’+ Nekuti handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi.” 14 Vadzidzi vaJohani vakabva vauya kwaari, vakabvunza kuti: “Nei isu nevaFarisi tichitsanya asi vadzidzi venyu vasingatsanyi?”+ 15 Jesu akabva ati kwavari: “Shamwari dzemurume ari kuroora dzingachema here idzo dzichiinaye?+ Asi mazuva achauya padzichatorerwa murume wacho,+ uye dzichabva dzatsanya. 16 Hapana munhu anosonera chigamba chejira idzva panguo yekunze tsaru, nekuti chigamba chacho chinobva chabvarura nguo yacho, pakabvaruka pacho powedzera.+ 17 Uyewo vanhu havaisi waini itsva muhomwe dzematehwe tsaru. Kana vakadaro, homwe dzematehwe dzewaini dzinobva dzabvaruka waini yorasika uye homwe dzacho dzematehwe dzoparara. Asi vanhu vanoisa waini itsva muhomwe dzematehwe itsva, uye zvese zviri zviviri zvinochengeteka.” 18 Paakanga achivaudza zvinhu izvi, mumwe mutongi akanga asvika akabva amupfugamira, achiti: “Kutaura kuno mwanasikana wangu anofanira kunge atofa, asi uyai muise ruoko rwenyu paari, uye achavazve mupenyu.”+ 19 Jesu akabva asimuka, ndokumutevera aine vadzidzi vake. 20 Uye mumwe mukadzi akanga achitambura nekubuda ropa kwemakore 12+ akauya nechekumashure kwake, akabata masa* enguo yake yekunze,+ 21 nekuti aingoti nechemumwoyo: “Kana ndikangobata nguo yake yekunze, ndichapora.” 22 Jesu akatendeuka, uye achimuona, akati: “Shinga, mwanasikana! Kutenda kwako kwakuporesa.”+ Kubvira panguva iyoyo mukadzi wacho akaporeswa.+ 23 Paakazopinda mumba memutongi wacho, achiona vanhu vairidza nyere uye vanhu vakawanda vaiita mheremhere,+ 24 Jesu akati: “Budai muno, nekuti musikana haana kufa, asi akarara.”+ Vakabva vatanga kumuseka zvekutsvinya. 25 Vanhu pavakangobudiswa panze, akapinda ndokubata ruoko rwake,+ musikana wacho akamuka.+ 26 Nyaya iyi yakapararira munharaunda yacho yese. 27 Jesu paaibva ipapo, varume vaviri vaiva mapofu+ vakamutevera, vachishevedzera vachiti: “Tinzwireiwo ngoni, Mwanakomana waDhavhidhi.” 28 Paakanga apinda mumba, varume vacho vakauya kwaari, Jesu akavabvunza kuti: “Munotenda here kuti ndinogona kuita izvi?”+ Vakamupindura vachiti: “Hongu, Ishe.” 29 Akabva abata maziso avo,+ achiti: “Ngazviitike kwamuri maererano nekutenda kwenyu.” 30 Maziso avo akatanga kuona. Jesu akavayambira zvakasimba, achiti: “Ivai nechokwadi chekuti hapana munhu anozozviziva.”+ 31 Asi pavakabuda panze, vakaudza vanhu nezvake munharaunda yacho yese. 32 Pavakanga vava kuenda, vanhu vakabva vamuunzira mumwe murume aiva mbeveve akanga akagarwa nedhimoni;+ 33 uye dhimoni racho parakadzingwa, murume uya aiva mbeveve akatanga kutaura.+ Vanhu vazhinji vakashamiswa, vakati: “Zvinhu zvakadai hazvina kumboonekwa muIsraeri.”+ 34 Asi vaFarisi vaiti: “Anodzinga madhimoni achishandisa mutongi wemadhimoni.”+ 35 Jesu akatanga kushanyira maguta ese nemisha achidzidzisa mumasinagogi avo nekuparidza mashoko akanaka eUmambo achirapa zvirwere zvemarudzi ese neundonda hwemarudzi ese.+ 36 Achiona vanhu vazhinji, akasiririswa navo,+ nekuti vaibatwa zvisina kunaka uye vakanga vakapararira semakwai asina mufudzi.+ 37 Akabva ati kuvadzidzi vake: “Kukohwa kukuru zvechokwadi, asi vashandi vashoma.+ 38 Saka kumbirai Tenzi wekukohwa kuti atumire vashandi vanoita basa rake rekukohwa.”+